Qabsoo Butame | The Hijacked Revolution - Bati Post
Kuku Samuel | November 22, 2020
Mootummaa dhaan butamee kan badee Falma Butame (The Hijacked Revolution) kitabaa jedhani woobsayitii keenyaa gadii lakkifnee jirra. Kitaaba san intarneetirra buusu dandeessani.
Falma Butame (Qabsoo Butame) Kanjedhamu Kan maxxaffamee wali gala jijjirramaan magaa kan dhufee lafa kan gadicakkisee, maalammaltumma, warra siyyasaa faayidaa falmataa walin dhuubu siyaasaa xinxallee nibsa.
Kitaabni addaduraa yoo maxxaffamu, namni baayeen isaani falasaa seena ocohhoni fudhachuuf baayee rakkatan. Yeroon yeroodhuan yoobakku buiuu, guyyoonnis yoo waljijjman, dhugummaan yaada kitabichuu. Ifaa ta’aa dhufeejira. Shira xaxxoota masaraa mootummaati hanga artisti Hacaaluu… walitti buyinsi D/r Abiyyifi obboo lammaa magarsaa akkamitti jalgabee? Fonkolchii mootumma naannoo Amaraafi Ajjechaan jeneraloota balleessa eenyutiin? Dhabbaanni dhimma nageenya (Security) maal gocha jira? Mootummaan eenyuu Ariyaa jira? Abiyyiin jawar mohammodi maasara mootu mmatti waamani maal jedhanini? Danieel kibrat, akkamitti masaraa mootumma galee? Abbiyidhaa sodaa kan ta’aan eenyu faadha? Pirofesarri Biranuu Neggaa maal gochuu jiru? Itiyoophiyaa keessatti mootumma sirna nafxanyaa wmmamuufi? Angoon Doktor Abiyyi hangoo eessatti? Shimallis Abdisaa akkamitti muuddamee eenyutu inni akka filatamu magaa isahnne? Obboo lamma Magarsaa akkamitti gara Federalatti dhufaan?… waluma galatti kitabichi tartibaan ibsee jira. Hamma hamma barreessan kitabichaa maalif akka Hidhameefi Kitabichi gabarraa kan gurramee ifa ta’ee jira. Kitaba keessatti kan barreeffamee wanta gabatamoti dhugaa kan gabanidhaa. Kitabicha keessatti kun akka dhufuu akka rajitti ibsamee ture. Barreesaa kitabichoo yoo beeku bannuullee masaraa mootummatti nama dhiyoo turee.
Kitaabni gabarraa gurraa moo badee kun weebsayiti keenyanatti niargama. Suurraa (mallattoo) xuguun hundaaisaa dubbisuu dandeesuu akka sumas buusuu dandessuu. Dubbisaa garii isiniif huuta’uu!
Gallatommii Meti Hunde!
Oromo, Qabsoo Butame Politics Comments Off on Qabsoo Butame | The Hijacked Revolution Print this News
The war in Tigray is a result of Ethiopia’s mismanaged transition (Newer)
(Older) የተጠለፈ ትግል- The Hijacked Revolution
ይህ በዋሽንግተን ዲሲ ለአማራ ፋኖ የተዘጋጀ የወታደር ማሰልጠኛ መመሪያ ነው Author Recent Posts KukuRead More
Author Recent Posts Kuku SamuelKuku Samuel is the fashion Instagram influencer, Publisher , photographer andRead More